Sanxin faly miaraka aminao!
Fa maninona no tianao be ny andron'ny ankizy? amin'ny fahazazanao, tsotra izao tontolo izao, Rehefa mifanena amin'ny olona ianao dia tsara fanahy; Miposaka ny masoandro, Mbola mitovy amin'ny izao tontolo izao ihany. Ny maha-zava-dehibe ny tsy fananan-tsiny toy ny zaza amin'ny fiainana ， Angamba izy, Miaraka amin'ny fahalianana mijery ny kaleidoscop ...
Miady amin'ny toe-javatra valanaretina
Novel coronavirus, sekreteran'ny komitin'ny antoko Nanchang County, Xiong Yunlang, talen'ny lefitry ny kongresin'ny vahoaka ao amin'ny distrika, Wu Xi, filoha lefitry ny governemanta ao amin'ny distrika, Wan Weiguo, filoha lefitry ny CPPCC ao amin'ny distrika, Wan Weiguo, sekretera an'ny komitin'ny antoko antoko Sanjiang , de ...
Miaraha hery hiadiana amin'ny toe-javatra valanaretina
Ny tolakandron'ny 12 febroary, Rao Jianming, sekreteran'ny vondrona antoko ary filoha lefitra mpanatanteraky ny fikambanan'ny sendika Jiangxi, dia niditra lalina tao amin'ny dokotera Sanxin mba hanadihady ny asa fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina, ary tamin'izany fotoana izany dia nandefa 50000 yuan an'ny fampiononana mon ...
Fanafihana mivantana ny sehatra voalohany | lanonana famaranana tonga lafatra
Ny tolakandron'ny 23 Mey 2020, Sanxin médical dia nanao fifaninanana kabary tamin'ny “fandraisana ny sehatra ho ivon-toerana” teo amin'ny rihana faha-6 an'ny biraon'ny birao, izay notarihin'i Zhou Cheng, foibe fanamoriana. Ny seho dia ny fijerena voalohany izay atrehinay, ary sehatra Taoista koa io ...
Ny tapany voalohany amin'ny fiofanana momba ny fitantanana fitsaboana Sanxin
Tamin'ny taona "epidemiana" manokana dia nanangona ny "Xinhuo" tamin'ny alàlan'ny sehatra rahona izahay ary tonga niaraka tamin'ny fianakavian'i Sanxin tamin'ny 28 Jona. Talent no fototry ny orinasa. Nanamafy hatrany ny sekretera jeneraly Xi fa ny talenta no loharanom-pahalalana stratejika hahatanteraka ny natio ...
Tamin'ny 19 May 2020, mba hamaly ny filàna stratejika amin'ny fampandrosoana maharitra sy maharitra ny orinasa, Sanxin Medical Co., Ltd. ary Dirui Consulting Co., Ltd. dia nanokatra ny fihaonan'ny fitantanana ny tetik'asa ho an'ny olombelona. Ny tetikasa dia miompana indrindra amin'ny consulting sy consulting momba ny talenta i ...